सगरमाथाकी छोरीको पत्र ज्वालामुखी जस्तै तातो ज्वालालाइ !! (भिडियो सहित)
काठमाडौं । सामाजिक संजालहरुमा सगरमाथाकी छोरी नामबाट चर्चित बनेकी सावित्री सुवेदीले नयाँ स्टाटस पोष्ट गरेकी छन् ।
प्रिय ज्वाला संग्रौला,
तिमीले बाटो परिवर्तन गर्दै समाज परिवर्तनकै बाटोमा लाग्नु किनकी डाक्टरले त केही बिरामीलाई उपचार गर्दछ तर एउटा सफल र नैतीक राजनीतिज्ञले देशको नै उपचार गर्दछ। आज देशमा हुर्किएको अराजकता,विधि र प्रकृयामाथि ठुलो हस्तक्षेपलाई निर्मुल पार्न युवाको सत्तामाथि पहुँच अावश्यक छ। तिमी गरीबहरुको पक्षमा राजनीतिको मिसायल बनेर अगाडि बढ्नु किनकी राजनीतिमा कहिल्यै पनि गरीबहरुले अवसर पाएनन । ज्वाला तिम्रो शिक्षा गरीबको निम्ति अमृत समान होस मेरो चाहना केबल यही छ।
राजनीतिमा प्राण त्याग गर्ने भनेको गरीब र निमुखा जनताले नै हो आजसम्म यही चलन छ,यो अन्याय पूर्ण छ । लगानी गर्ने एउटा र अवसर प्राप्त गर्ने एउटा । गरीबहरुले लगानी गर्ने अनि अवसरमा लाभको पदमा पुग्ने अवसरवादीहरु नै हुन ।
ज्वाला आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिका लागि कसैको रगतमाथि होली नखेल्नु किनकी त्यो रगतले पोल्छ अनि तिमी देखेको सपना र उनीहरुले देखाएको सपनामा खासै के फरक पर्ला र ?
त्यसैले तिमीले गरीबको निम्ति राजनीति गर्नु जहाँ गरीबले मन फुकाएर बाँच्न सकोस ।
तिम्रा बिचारलाई तहस नहस पार्न पैसाका बिट्टाले हानिन सक्छ त्यतिबेला तिमीले तिम्रो दृष्टि नगुमाउनु । जिन्दगीमा कहिलेकाहीँ यतीसम्मको बोल्ड निर्णय लिनु कि जहाँ तिमीले आँफै हार्दा लाखौं ति तिमीले प्रतिनिधित्व गरेका जनताले जितेको अवस्था सृजना होस् ।
एउटा सिटामोल नपाएर प्राण त्याग गर्नु पर्ने ठाउँमा तिमीले गरेको राजनीति गरीब निमुखाहरुको निम्ति बरदान साबित हुनेछ ।
गरीब भएर एकछाक खानका निम्ति संघर्ष गर्दागर्दै प्राण त्याग गर्ने या गरीबहरुको मसिहा बनेर औचित्यपूर्ण ढंगबाट समाज रुपान्त्रणका निम्ति लाखौंको नेतृत्व गर्दै सम्मानपूर्ण मर्ने यो तिम्रै निर्णयमा भर पर्ने छ।
को हुन् ज्वाला संग्रौला यो भिडियो सुन्नुहोस